I-Rose amanzi ekhaya
Phakathi kwezinhlobonhlobo ezinamahloni zezitshalo ezihle kakhulu, ukuqashelwa okuphawulekayo kutholakala yi-rose. Ubuhle bakhe bemilingo buye kwaheha indoda iminyaka eminengi. Wayethandwa, wahlabelela futhi wakhuleka kusukela esikhathini esidlule - izikhathi zeGrisi neRoma lasendulo. I-rose yezinkulungwane ezingaba yizinkulungwane ezingamashumi amabili idumile futhi ithandwa yibo bonke abantu bezwe. Kodwa i-rose ayiyona nje isitshalo sokuhlobisa. Amagundane alo anempahla eminingi yokuphulukisa. Manje izindlela eziningi zokupheka ziyaziwa ukuthi amanzi asemakhaleni ayenziwa kanjani ekhaya.
Izimbali ezimbalwa kakhulu ekucekeni kwamafomu, iphunga, umbala wombala ongavamile, ubude nokuchichima kwezimbali kungafaniswa ne-rose. Okwamanje, kunezinkulungwane zezinhlobonhlobo zama roses. Emagumbini e-rose anesisindo esikhulu sevithamini C, futhi ngisho nangaleso sikhathi, izinkulungwane zeminyaka edlule, abantu baqala ukuwadla, ugwebu oluphekiwe, benza iwayini, izimonyo ezenziweyo nemithi. Ama-Rose petals anezinhlanzi eziphumuzayo, ezibuyisela emuva, ezincelisayo, ezonda ukulimala kanye neziphikisayo.
Njengama-anti-inflammatory and antiseptic, amanzi asemhlophe asetshenziselwa ekhaya, alungiswa ngamapuni wezipuni amathathu, agcwele izibuko ezimbili zamanzi abilayo, bese kuthi amanzi agcizelelwe esitsheni esivaliwe okungenani amahora ayishumi nambili. Thatha izidakamizwa kathathu ngosuku, imizuzu engamashumi amathathu ngaphambi kokudla amalitha angu-150-200.
Amanzi okuphulukisa afanayo ekhaya abuye alungiswe ngokubilisa. Ukwenza lokhu, udinga ukuthatha ama-rose petals fresh, ulibeke esitsheni, ulethe emathunjini ekushiseni okuphansi. Pheka kuze kube mzuzu lapho izikhala ziba nombala, zinzima futhi zipholile. Ukulungisa amanzi asemkhathini ezinxenyeni ezinkulu akudingekile, ngesitoreji sesikhathi eside, izakhiwo zalo zokwelapha zilahlekile. Le mhlu ingasetshenziswa futhi ukugeza, ikakhulukazi eshisayo.
Ngenxa yezindawo zalo, amanzi okuphulukisa ama-pink aphelele ekunakekeleni inkinga, isikhumba samafutha sobuso. Ukuze ulungiselele ukwelashwa okuphumelelayo, kutholakala amagatsha amancane aqoshiwe we-hazel nut. Kufanele ithulwe ngamanzi abilayo bese upheka imizuzu engamashumi amathathu ebhodini lokugeza. Kulungile, ukuxuba bese uhlangana namanzi aphekwe amanzi: ingxenye eyodwa ye-hazel nezingxenye ezintathu zamanzi a-rose. Futhi ukunakekelwa isikhumba evamile, kwanele ukubhoboza amaconsi ambalwa kalamula noma ijusi le-orange ngaphakathi kwamanzi aphuzi.
Amanzi amantombazane ama-Pink angabuye abe yindlela yokwelapha nokuvimbela ngokumelene ne-conjunctivitis, zonke izinhlobo zokuvuvukala nokukhathala kwamehlo. Kuzokwanela ukuvuza amaconsi ambalwa, noma nje ukwenza ukucindezeleka endaweni yeso, futhi ngokushesha uzizwe ukhululekile.
Ukucindezelwa ngamanzi asemanzini kungakunika usizo lokuqala ngekhanda elibi: ukucindezela okubandayo ngamanzi asemhlabeni kusetshenziswe ebunzini futhi ngokoqobo emva kwemizuzu eyishumi nanhlanu ubuhlungu buyodlula.
I-phytotherapeutists yanamuhla ivame ukuphakamisa izindlela zokwelapha zokwelashwa kwezitho zokuphefumula: ukukhwehlela, i-angina, i-asthma ye-bronchial kanye nezifo ikakhulukazi zemvelo, njengama-rinses, amaconsi, ukucindezela ngisho nokungena. Futhi ngezifo ze-catarrhal ukuze usheshe ususe ukushisa, kunconywa ukuba usule wonke umzimba nge-infusion yamanzi ase-rose. Uma umphimbo wakho ubuhlungu, amazinyo akho aphuka futhi izinsini zakho zivutha, udinga ukugeza umlomo wakho ngokumnika amanzi wamanzi futhi ubuhlungu buzophulukana ngokushesha.
Leli gama, ngenxa yezimfanelo zalo, phakathi neholidi lizoba yisigceme esiphelele se-tan engenakulungiswa.
Kanye nama-rose asemanzini nase-cosmetology, nakwezokwelapha, ngisho nasezinyambweni eziningi zokuthuthukisa impilo, amafutha abalulekile asetshenziswa kabanzi. Ngaphandle kwezinto eziyisimangaliso, le remedy ibuye ibe nephunga eliyingqayizivele, okuyinto ngokwalo eliyinkinga futhi lisetshenziselwa ukukhulula ikhanda, isizungu, isicashu, ubuthakathaka.
Kunconywa kakhulu ukufaka amaphuphu amafutha esibalulekile amafutha ebantwini kubantu abanokukhungatheka okukhulu, okubangelwa yizinzwa ne-depression, nge-angina pectoris. Futhi ukuthuthukisa umphumela we-flavour, ungenza inhalation ngokungeziwe kwamafutha we-rose.
Ukugeza okuhle kakhulu kanye nezakhiwo zokuhlala kahle kubhekwa ngamanzi okugcoba ama-rose amathoni: amathoni, aqeda ukukhathala, ukukhathazeka, ukusekela ithoni yenhliziyo, ukuhlanza isikhumba. Ilungiselelwe ngokusheshisa futhi ngokushesha: 0, 5 izinkomishi zama-rose amacembe athululela amanzi abilayo, ugcizelela futhi uthele emhubheni kanye namacembe. Ukuthuthukisa umphumela wokuphulukisa emanzini, ungangeza ijusi elincane le-beet.
Kodwa akusikho konke. Kusukela ezikhathini zaseRoma lasendulo, abantu baye benza ama-roses ama-rose ama-roses anempepho, benza i-jam ne-jams, benza ama-pastilles kanye nama-sherbets, benza i-compote, benza iwayini futhi baze bawasebenzise nokugcwalisa i-confectionery. Futhi konke lokhu kuyasiza futhi, ngoba kwenziwa ngokuphulukisa ama-rose petals.
Izakhiwo eziwusizo zetiyi
Ukubuthwa endaweni esondelene nayo: Izimbangela Nezokwelapha
Ukuqeqeshwa kokwelapha ngokomzimba kanye nokusikhipha umzimba
Adenoiditis, Yebo, ukwelashwa, ukuvimbela
Kanjani nokuthi kungani ukuzila ukudla?
Iziphi izimbali ezinomthelela omubi empilweni?
Izikhwama eziningi emilenzeni
ISlovenia - izwe lezinganekwane, izinqaba nezintaba
I-horoscope yeqiniso yeviki lika-Okthoba 30 - Novemba 5, 2017
Rolls of iklabishi
Indlela yokuhalalisela umfana onosuku luka-Valentine
I-recipe yengulube ye-ngulube
Imikhiqizo yokwandiswa kwentsha
Isaladi lamazambane eJalimane
Ukuhlukunyezwa kuvela ekuzijabuliseni!
Indlela yokuvikela impilo yabesifazane?
Isobho ngempahla ekheniwe "Ama-sardines emafutheni"
Ubulili esikhundleni sokuqina: indlela enhle yokuba mncane
Itiye elibomvu nge-ginger